Mayelana NATHI - Shenzhen Xinyuanjiaye Technology Co, Ltd.
ISENZHEN XINYUANJIAYE COCHNOLOGY CO., LTD yasungulwa ngonyaka ka-2011 futhi isendaweni yaseShenzhen, idolobha elihle lolwandle. Ngumkhiqizi wemaski ochwepheshe onekhono lokukhiqiza nsuku zonke lamamaski ayi-1.5. Ungomunye wabakhiqizi abakhulu be-mask eSouth China. Isisekelo sitholakala Masha Xuda High-tech Industrial Park, No. 49 North Education Road, Gaoqiao Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen.
Imikhiqizo ifaka phakathi: imaski yokuvikela elahlekayo, imaski yokulahleka kokulahlwa, imaski yokugoqa (i-KN95), njll, ukumboza ukunakekelwa kwezempilo, imboni yokudla neyamakhemikhali, imishini ye-elekhthronikhi, imboni yamakhemikhali emihle kanye nezinye izimboni ezihlobene, eziye zathola udumo oluvela kubantu abanokuqondisisa ku imboni. Imikhiqizo ikhiqizwa ngokuya ngamazinga afanele asekhaya nawezwe lonke, futhi imikhiqizo ethunyelwa kwamanye amazwe ihlangabezana nezidingo zokuthola isitifiketi ze-EU CE ne-US FDA.
Njengomunye wemikhiqizo emisha ehamba phambili embonini yemaski, sinekamelo elicocekile elinamazinga ayi-100,000 nemishini yokukhiqiza ethuthukile, ukuphathwa kwamabhizinisi okuqinile, futhi sinikeze abathengi imikhiqizo esezingeni eliphakeme futhi ezinzile. Imikhiqizo yathunyelwa eYurophu, e-Afrika, eCanada, eJapan, Southeast Asia nakwezinye izindawo